सावधान ! यी हुन् सबैभन्दा कमजोर पासवर्ड : सूचनाका लागि सबैले सेयर गरौ - Arthikbazar.com
सावधान ! यी हुन् सबैभन्दा कमजोर पासवर्ड : सूचनाका लागि सबैले सेयर गरौ
Arthikbazar.com – यो वर्ष सन् २०१८ मा सबैभन्दा धेरै ह्याक भएका वा सर्वाधिक कमजोर पासवर्डको खुलासा भएको छ ।
साइबर सेक्योरिटी फर्म स्प्लास डाटाले यसको खुलासा गरेको हो । वर्षको सबैभन्दा कमजोर पासवर्डको सूचिमा १२३४५६ सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । १२३४५ सबैभन्दा कमजोर पासवर्डको पहिलो स्थानमा रहेको यो लगातार पाँचौँ वर्ष हो ।
रिपोर्टमा प्रयोगकर्तालाई फरक फरक अकाउन्ट वा डिभाइसका लागि फरक फरक पासवर्ड प्रयोग गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । यसो गर्दा ह्याकरले तपाइँको एउटा अकाउन्ट वा डिभाइसको पासवर्ड हात पारेर ह्याक गरेसँगै सबै डिभाइस वा अकाउन्ट स्वतः असुरक्षित हुने खतरा हुँदैन । एजेन्सी